Ukutshintsha kweeHuawei Abavelisi | Kwichina China Shintsha iFektri kunye nabaXhasi
S5730-HI Series Ijija
Ukutshintsha kweHuawei S5730-HI zizinto ezilandelayo ezizalisekayo zokutshintsha kwe-IDN ezibonelela ngokungena kumazibuko onke e-gigabit, amazibuko ayi-10 e-uplink, kunye namakhadi awandisiweyo okwandiswa kwamazibuko e-uplink.
I-S5730-HI switch switch zibonelela ngamakhono emveli e-AC kwaye zinokulawula ii-1K APs. Babonelela ngokuhamba simahla kokusebenza ukuqinisekisa amava omsebenzisi angaguqukiyo kwaye iVXLAN inakho ukumilisela ubuchule benethiwekhi. I-S5730-HI series switches ikwabonelela ngenkqubo ezakhelwe-ngaphakathi zokhuseleko kunye nenkxaso yokufumana ukungaqhelekanga kwezithuthi, i-Encrypted Communications Analytics (ECA), kunye nenkohliso yenethiwekhi ngokubanzi. I-S5730-HI series switches zilungele ukuhlanganiswa kunye nokufikelela kwiindawo zokunxibelelana kweekhampasi eziphakathi kunye nezikhulu kunye nongqameko lwee-campus zesebe kunye neenethiwekhi ezincinci zekampus.
S5730-SI Series Ijija
Iitshintshi zothotho lwe-S5730-SI (S5730-SI ngamafutshane) zizigaba ezi-standard standard ze-gigabit Layer 3 Ethernet switch. Zingasetyenziselwa ukufikelela okanye ukutshintshela ukudityaniswa kwenethiwekhi yekhampasi okanye njengokutshintsha ukufikelela kwiziko ledatha.
Iswitshi ye-S5730-SI inika ufikelelo oluguquguqukayo olupheleleyo lwe-gigabit kunye neendleko ezisebenzayo ezingalunganga ze-GE / 10 GE uplink port. Okwangoku, i-S5730-SI inokubonelela nge-4 x 40 GE uplink port ngamakhadi esibonakalayo.
Ukutshintsha kwe-S6300 (i-S6300 ngamafutshane) kukutshintsha kwebhokisi ye-10-gigabit yebhokisi elandelayo eyenziwe nguHuawei yokufikelela iiseva ze-10-gigabit kwiziko ledatha kunye nezixhobo eziguqulwayo kwiNethiwekhi yeNgingqi yeNgingqi (MAN) okanye inethiwekhi yekhampasi. I-S6300, yenye yezona zinto zilungileyo ezitshintshileyo kushishino, ibonelela ubuninzi be-24/48-line-speed-10-gigabit interfaces, enika ithuba lokufikelela koxinano oluphezulu lweeseva ze-10-gigabit kwiziko ledatha kwaye liphezulu -Ukuhlangana kobuninzi bezixhobo ze-10-gigabit kwinethiwekhi yekhampasi. Ukongeza, i-S6300 ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo, amanyathelo olawulo olugqibeleleyo, kunye neendlela ezininzi zokulawula iQoS ukuhlangabezana neemfuno zamaziko edatha ukuze kwandiswe, kuthembeke, kulawulwe, kwaye kukhuseleke.
Iitshintshi zoluhlu lwe-S6700 (S6700s) zizitshintshi zebhokisi ye-10G elandelayo. I-S6700 inokusebenza njengokutshintsha ukufikelela kwiziko ledatha ye-Intanethi (IDC) okanye iswitshi engundoqo kuthungelwano lwekhampasi.
I-S6700 inentsebenzo ekhokelayo kwimizi-mveliso kwaye ibonelela ukuya kuthi ga kwi-24 okanye kwi-48 ye-line-speed 10GE port. Ingasetyenziselwa kwiziko ledatha ukubonelela nge-10 Gbit / s ukufikelela kwiiseva okanye ukusebenza njengotshintsho oluphambili kwinethiwekhi yekhampasi ukubonelela ngokudityaniswa kwe-10 Gbit / s. Ukongeza, i-S6700 ibonelela ngeenkonzo ezahlukeneyo, imigaqo-nkqubo ebanzi yezokhuseleko, kunye neempawu ezahlukeneyo zeQoS ukunceda abathengi ukuba bakhe amaziko edatha ahlaziyekayo, alawulwayo, athembekileyo nokhuseleko. I-S6700 ifumaneka kwiimodeli ezimbini: S6700-48-EI kunye S6700-24-EI.
S6720-EI Series Ijija
Ukukhokelwa ngumzi-mveliso, ukusebenza okuphezulu kweHuawei S6720-EI uthotho lokutshintsha okungaguqukiyo kubonelela ngeenkonzo ezibanzi, imigaqo-nkqubo ebanzi yolawulo lokhuseleko, kunye neempawu ezahlukeneyo zeQoS. I-S6720-EI inokusetyenziselwa ukufikelela kumncedisi kumaziko edatha okanye njengokutshintsha okungundoqo kothungelwano lwekampus.
S6720-HI Series Ijija
I-S6720-HI uthotho olupheleleyo-olubonisa ukutshintsha kwemizila ye-10 GE zii-switch zokuqala ezilungisiweyo ze-IDN ze-Huawei ezibonelela ngamazibuko ali-10 e-downlink kunye ne-40 GE / 100 GE uplink port.
S6720-HI series itshintshela inika amandla e-AC kwaye inokulawula ii-1K APs. Babonelela ngokuhamba simahla kokusebenza ukuqinisekisa amava omsebenzisi angaguqukiyo kwaye iVXLAN inakho ukumilisela ubuchule benethiwekhi. I-S6720-HI series switches ikwabonelela ngenkqubo ezakhiweyo ezikhuselekileyo kunye nenkxaso yokufumana ukungaqhelekanga kwezithuthi, i-Encrypted Communications Analytics (ECA), kunye nenkohliso yenethiwekhi ngokubanzi. I-S6720-HI ilungele iikhampasi zeshishini, abathwali, amaziko emfundo aphakamileyo kunye noorhulumente.
S6720-LI Series Ijija
Uthotho lweHuawei S6720-LI zizizukulwana ezilandelayo zilula zonke i-10 GE itshintshi esisigxina kwaye inokusetyenziselwa ukufikelela kwi-10 GE kwikhampasi nakwiziko ledatha yenethiwekhi.
S6720-SI Series Multi GE Ijija
I-Huawei S6720-SI uthotho lwesizukulwane esilandelayo Imulti GE iitshintshi ezizinzileyo zilungele ukufikelela kwisantya esiphezulu sokufikelela kwesixhobo ngaphandle kwamacingo, ukufikelela kwiziko ledatha ye-GE yedatha, kunye nokufikelela kwinethiwekhi / ukuhlanganiswa.
Huawei CloudEngine S6730-H Series 10 GE Ijija
I-CloudEngine S6730-H Series 10 GE Switches ihambisa i-10 GE downlink kunye ne-100 GE uplink yokunxibelelana kweekhampasi zeshishini, abathwali, amaziko emfundo aphakamileyo, kunye noorhulumente, ukudibanisa ubuchule beNgingqi yeNgingqi yeNethiwekhi (WLAN) yokuFikelela kuMlawuli (AC), ukuxhasa ukuya kuthi ga Amanqaku okufikelela kwi-1024 WLAN (APs).
Olu luhlu lwenza ukuba ukuhlangana kothungelwano olungenazingcingo kunye olungenazingcingo- ukwenza lula imisebenzi-enikezela ukuhamba ngokukhululekileyo ukuhambisa amava omsebenzisi angatshintshiyo kunye neNgcaciso yeNgingqi yeNgingqi yeNethiwekhi (VXLAN) esekwe kubuchule, ukudala uthungelwano lweenjongo ezininzi. Ngezinto ezakhelwe-ngaphakathi kukhuseleko, i-CloudEngine S6730-H ixhasa ukufunyanwa okungaqhelekanga kwezithuthi, i-Encrypted Communications Analytics (ECA), kunye nenkohliso yenethiwekhi ngokubanzi.
I-Huawei CloudEngine S6730-S Series 10GE Ijija
Ukubonelela ngamazibuko e-10 GE ezantsi ecaleni kwamazibuko angama-40 e-GE uplink, iiHuawei CloudEngine S6730-S zitshintshela uthotho lokuhambisa isantya esiphezulu, ukufikelela kwe-10 Gbit / s kwiiseva ezixineneyo. I-CloudEngine S6730-S ikwasebenza njengombindi okanye utshintsho kumdibaniso wekhampasi yenethiwekhi, ukubonelela ngereyithi ye-40 Gbit / s.
Ngonxibelelwano lweNdawo yeNgingqi eyandisiweyo yeVenkile (VXLAN) esekwe kumgaqo-nkqubo, imigaqo-nkqubo yezokhuseleko ebanzi, kunye noluhlu lweempawu zeMigangatho yeNkonzo (QoS), i-CloudEngine S6730-S inceda amashishini akhe iikhampasi ezinokuthenjwa, ezithembakeleyo nezikhuselekileyo kunye neziko ledatha.
Quidway S5300 Series Gigabit Ijija
I-Quidway S5300 series switch gigabit switch (apha ekubhekiswa kuyo njenge-S5300s) sisitshintshi esitsha se-Ethernet gigabit esiphuhliswe nguHuawei ukuhlangabezana neemfuno zokufikelela kwi-bandwidth ephezulu kunye ne-Ethernet yokunikezelwa kweenkonzo ezininzi, ukubonelela ngemisebenzi enamandla ye-Ethernet kubathwali kunye nabathengi beshishini. Ngokusekwe kwisoftware yokusebenza okuphezulu kwesoftware kunye nesoftware yeHuawei Versatile Routing Platform (VRP), i-S5300 inezinto ezinkulu kunye ne-gigabit ujongano oluphezulu, ibonelela nge-10G uplinks, ukuhlangabezana neemfuno zabathengi ze-1G kunye ne-10G izixhobo ze-uplink zoxinaniso oluphezulu. I-S5300 inokuhlangabezana neemfuno zeemeko ezininzi ezinje ngokudibana kwenkonzo kumnatha wekhampasi nakwiintranet, ukufikelela kwi-IDC ngereyithi ye-1000 Mbit / s, kunye nokufikelela kwiikhompyuter kwinqanaba le-1000 Mbit / s kwii-intranet. I-S5300 sisixhobo esimise okwetyala kunye ne-chassis ye-1 U ephezulu. Uchungechunge lwe-S5300 luhlelwe kwi-SI (standard) kunye ne-EI (ephuculweyo). I-S5300 yenguqulo ye-SI ixhasa imisebenzi emi-2 yoLwakhiwo kunye nemisebenzi esisiseko yoLuhlu lwe-3, kwaye i-S5300 yenguqulo ye-EI ixhasa iiprothokholi zendlela enzima kunye neempawu zenkonzo etyebileyo. Iimodeli ze-S5300 zibandakanya i-S5324TP-SI, S5328C-SI, S5328C-EI, S5328C-EI-24S, S5348TP-SI, S5352C-SI, S5352C-EI, S5324TP- PWR-SI, S5328C-PWR -PWR-EI, S5348TP-PWR-SI, S5352C-PWR-SI, kunye ne-S5352C-PWR-EI.
S2700 Series Ijija
I-S2700 Series Switches ibonelela ngokukhawuleza okukhulu nangokubambelela kwamandla, inika isantya se-Ethernet eyi-100 Mbit / s ngesantya sothungelwano lweekhampasi zeshishini. Ukudibanisa ubuchwephesha bokutshintsha okuqhubekekayo, isoftware yeHuawei's Versatile Routing Platform (VRP), kunye neempawu ezikhuselekileyo zokhuselo, olu ngcelele lulungele ukwakha nokwandisa uthungelwano lweTekhnoloji yoLwazi yexesha elizayo (IT).